-Dhacdo Dheeman Resin bond saxannada suufka qoyan ee suufka ah ee Dabaqa la taaban karo
Dheeman Resin bond saxannada suufka qoyan ee suufka ah ee Dabaqa la taaban karo
Z-LION 16A Dheeman Resin Bond Pad suufka qoyan waxaa loogu talagalay in lagu socodsiiyo biyo si loogu nadiifiyo qoyan ee sagxadaha shubka ah.Qaacido gaar ah oo leh dheeman tayo sare leh iyo resins si loo hubiyo waxqabadka ugu fiican.Si dhakhso leh u dhalaalid, dhalaal iyo hufnaan ka wanaagsan, cimri dheer.
Dhexroorka:3 "(80mm) 4" (100mm)
Qalab:Dheeman curaarta resin
Gariir:50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#,3000#
Dhexroorku waa 3" (80mm) iyo dhumucdiisuna waa 10.5mm.
Habka pie dhaqameedbacaadka la taaban karooo leh boosas ballaadhan oo ay fududahay in slurry soo baxo.
Lakabka caagga ah ee u dhexeeya resin iyo velcro si uu u nuugo gariirka.
50# 100# 200# 400# 800# 1500# 3000#.
Iyada oo leh dheeman tayo sare leh iyo resins oo ku jira caanaha, suufku si fiican ayuu u shaqeeyaa badi codsiyada qalalan inkasta oo loogu talagalay in lagu nadiifiyo qoyan.
Inta badan loo isticmaalo Furimaha Dagaalka ee sagxadda rinjiyeynta.
Z-LION 16A dheeman qoyansuufka dhalaalka ah ee resinwaa sagxadaha sagxada sibidhka ee caanka ku ah suuqa.Astaamaha gaarka ah ee suufkan polishing waa sida soo socota:
Dheeman tayo sare leh iyo resins tayo sare leh ayaa loo isticmaalaa qaacidada si loo hubiyo in tayada sare leh ee polishing, aan wareejin resin, dhalaal sare iyo caddayn fiican.
In kastoo suufka loogu talagalay in lagu nadiifiyo qoyan, macaamiisheena badankoodu waxay door bidaan inay qallajiyaan waxayna si la mid ah u shaqeeyaan codsiyada qalalan.
Qurxintan suufka ah waxay u xidhan tahay si siman oo dheer, 12pcs ah ayaa daboolaya 8000-15000 cagood oo laba jibbaaran.
Tayada qiimaha leh, dhalaal degdega ah, dhalaal iyo hufnaan ka wanaagsan, cimri dheer
Lakabka caagga ah ee adkaanta saxda ah, si loo nuugo gariirka isla mar ahaantaana la kordhiyo xabagta u dhexeysa velcro iyo resin.Ma jiro velcro diiray si suufka loo isticmaalo dibadda.
Nidaamyo kala duwan 16K,16A,16KA,16KY oo lagu sameeyay qaacido isku mid ah oo kaliya caaryo kala duwan.Qaababka kale waa la habeyn karaa, dalabka OEM/ODM waa la soo dhaweynayaa.
Qaabka No. ZL-16A
Dhexroorka 3 "(80mm) 4" (100mm)
Qalab Dheeman curaarta resin
Grit 50#, 100#, 200#, 400#, 800#, 1500#,3000#
Waxa si weyn loogu isticmaalaa diyaarinta sagxada sagxadda iyo dib u soo celinta, sida bakhaar, baarkin, aqoon-is-weydaarsi, supermarket iwm.qalabka wax lagu shiido dheemansi aad u nadiifiso dabaqa shubka ah oo aad u hesho caddayn fiican, dabaq dhalaalaya sare leh.Inta badan loo isticmaalo codsiga qoyan.
Hore: 3 inch Boondhiga dhoobada ah ee wareejinta dheemanka suufka ah ee Dabaqadda la taaban karo
3 oo ku jira suufka dhalaalaya
4 inch Furimaha Dagaalka
disc Furimaha sibidhka
suuf dheeman ah
suufka dhalaalka ah ee resin diamond
suufka suufka ee shubka
suufka dheemanka qoyan
Qalabka ka saarista dahaadhka PCD ee trapezoid ee xoqidda
Malabka suufka dheemanka ee engegan ee qalalan
Qaabka duufaanka qoyan ee resin dheeman suufka ah...
Qurxinta dheemanka qoyan ee qaabka qoyan ee Pie